A dinôzôro Costume, Vala fialam-boly mitaingina - Ocean Art
Ahoana no To Buy
Dinôzôro Hand saribakoly
Mandeha dinôzôro Ride
Dinôzôro Battery ny hovidiana
Fiberglass Sariitatra Sculpture
Ocean City Zigong Art Co., Ltd.
(Izay voambara antsoina hoe Ocean Art), niorina tamin'ny taona 2009, izay hita ao amin'ny Avo-teknolojia Industrial Park, Zigong City, Sichuan Province, ary izany dia Integrated siansa sy ny teknolojia orinasa izay manokana amin'ny famolavolana sy ny fampandrosoana, fanamboarana, varotra, ary simulation fampirantiana ny vokatra. Ocean Art mifantoka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny animatronic dinosaurs, simulation biby sy ny bibikely, sy ny taolany dinôzôro sisan-karingarina, solon-zavamaniry fahiny, nalevina fandavahana an-tsaha, ary mandeha kely ny endriky ny akanjo sy ny dinôzôro simulation vokatra.
Fa ny fanontaniana momba ny vokatra na ny vidiny lisitra, antsoy fotsiny izahay! nanontany
Dinôzôro Park any Rosia, 2016 Winter
Sanya 2017 Haitang Bay dinôzôro Theme National Park
Dinôzôro Park any Rosia, 2016 Summer
2017 dinôzôro Dream Park in Xiamen
tsy afaka ny ho haizina ny antony intsony ny ankizy tsy nitsidika ny dinôzôro lohahevitra zaridaina, ary ity raharaha ity no porofo tsara indrindra.
Ny voalohany dia enina amby enim-polo dinôzôro Shinoa kintana in Haitang Bay dinôzôro zaridaina no fototry ny dinôzôro fikarohana ao Shina. Rehetra izy ireo aseho amin'ny lalan'ny 1: 1 modely tany am-boalohany lehibe. Ny enina amby enimpolo animatronic karazana dinôzôro izay maded avy ao amin'ny valan-javaboary izahay no nametraka. Dinosaurs ireo dia vita amin'ny vy sy taolana silica ambonin'ny gel. Afaka miala ny vatana sy hanao ny feo, ary ny simulation no avo indrindra.
2016 Summer.Everyone tia ny mahita dinosaurs ao amin'ny foto-kevitra zaridaina satria hitondra fientanentanana bebe kokoa. Indrindra ho an'ny ny ankizy, dia adala ny animatronic dinosaurs. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan 'ny foto-kevitra zaridaina Tsy mitovy ny biby sy ny modely animatronics, indrindra dinosaurs izay hanampy ny hisarihana bebe kokoa visitors.And ity valan-javaboary dinôzôro Rosiana no ohatra tsara indrindra.
Ny tsara indrindra zaridaina dinôzôro nisokatra tany Xiamen. Izany dia tsy mitovy amin'ny valan-javaboary nentim-paharazana dinôzôro ary bebe kokoa tahaka ny dinôzôro siansa tranom-bakoka. Vahiny rehetra mahazo ny feno indrindra sy mampientam-po tsary traikefa
More be mpividy indrindra Products
Address: No.93, yejiagou, lianggaoshan arabe, da 'ny distrika, zigong tanàna
Mechanical Dinosaur, Chinese New Year Dragon Costume, Walking Ride On Dinosaur, Giant Animatronic Dragon, dinôzôro Train , Animatronic Dragon For Sale,